पत्रकार लम्सालको ‘नि हाउ ! नमस्ते !’ सार्वजनिक – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०८:४० English
पत्रकार लम्सालको ‘नि हाउ ! नमस्ते !’ सार्वजनिक
काठमाडौँ, १६ जेठ । लामो समयदेखि रेडियो पत्रकारितामा संलग्न पत्रकार लक्ष्मी लम्सालको ‘नि हाउ ! नमस्ते !’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ ।
बुलबुल पब्लिकेशनद्वारा प्रकाशित पुस्तक आज एक कार्यक्रमबीच विभिन्न क्षेत्रका सञ्चारकर्मीले सामूहिकरूपमा सार्वजनिक गर्नुभयो । पुस्तकमाथि वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइराला, अमृता लम्साल र युवा पत्रकार पवन आचार्यले समीक्षा गर्नुहुँदै चीनका विषयमा जानकारी लिन पुस्तकको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कतिपय लेखले चीनप्रति अपरिचित नेपालीका लागि प्रत्यक्ष अनुभवको आभाष दिलाउनेछ । विश्वविख्यात ग्रेट वाल, चिनियाँ जीवनमा अंकहरूको भूमिका, परम्परागत चिकित्सा, युद्धकला (कलाबाजी), चिनियाँ खानपान र संस्कृति, नेपाल र चीनबीचका केही मिल्दाजुल्दा चाडपर्व, चिनियाँ पे्रम जीवनलगायतका विषयले पाठकलाई चीनकाबारेमा धेरै जानकारी गराउनेछ ।
१६ जेष्ठ २०७५, बुधबार २३:५३ मा प्रकाशित